Dzemari, yakavakwa Ulugbek - Observatory (Samarkand, Uzbekistan): tsananguro, nhoroondo uye zvinonakidza zvinhu
News uye Society, Mhepo mvura nenzvimbo
In Uzbekistan, kunounza uye akanaka guta Samarkand, iyo kazhinji anonziwo pachena mhepo miziyamu. Uye ichi haasi masanga. Kare, nzvimbo iyi aiva mumwe simba kupfuura yechitendero, zvematongerwo enyika, tsika uye kwesayenzi nzvimbo Asia. Kamwe vasayendisiti uye voruzhinji vaigara munharaunda yayo, akaita nemamwe zvakawanikwa pano uye akavaka zvivako zvakanaka kwazvo. A mupiro kunyanya makuru sayenzi mutongi Mohammed Taragay, nani inonzi Ulugbek. The Observatory, akamisira riri kuonekwa mumwe chikuru zvinokwezva muguta. Chinhu akapfuma zvenhau netsika nhaka.
A zvishoma mutongi kunozivikanwa
Mohammed Taragay muzukuru mukuru Amir Katya. Kubva achiri muduku akaratidza kufarira zvikuru zvesayenzi siyana uye chido chikuru zivo. Mukomana haana pachisikigo somukundi, kufanana inozivikanwa sekuru vake - Tamerlane. Training mutongi yemberi Samarkand avimbiswa zvakanakisisa vadzidzisi iyoyo. Vadzidzisi vakakwanisa kumudzidzisa kuda unyanzvi uye sayenzi.
Sezvo vaduku chaizvo, akaenda sekuru wake mumwe hasha mushandirapamwe. Pavaifamba, akaona kujairika kuvaka Ulugbek. The Observatory, chakavakwa nemasayendisiti kuti kuAzerbaijan, akakunda mukomana rayo mapurani uye runako. Tinogona kutaura kuti panguva chaiyo nguva iri mumwoyo Mohammed duku Taragay vakagara hope yake chete tsvakurudzo centre. Pashure pechinguvana Ulugbek akava mutongi Maurya, guta guru raiva Samarkand. Akatanga kuona pfungwa dzavo kare zviitike.
History Zvisikwa zvose upenyu hope
Building kuvaka kwakatanga muna 1420 pamusoro kuvakwa basa rake zvakaitwa anenge makore matatu. Kukura plan chivako mupiro hombe nemasayendisiti uye nyanzvi, saka pakupedzisira Samarkand Ulugbek Observatory chiri yakanaka mudziyo kuti vachiongorora siyana vasiri mureza uye yepakutanga yepasi pose miviri. Chaiva uriri matatu uye akanga chimiro humburumbira. Chivako ichi Zvinoshamisa pakunaka kwawo uye mavambo, sezvo ayo mapurani haana kwese zvivako zvetsika kubva Middle East. Chivako ichi zvikuru rine mu masvingo aro chikuru protractor, ane nharaunda akaenzana anopfuura 40 m. Nemhaka mudziyo uyu zvaigoneka kuyera kureba mitumbi yokudenga pavanenge nomunyika zvomuchadenga Meridian.
On nharaunda muzinda uyu dzesayenzi Ndakaedza kupedza vakasununguka nguva yavo Ulugbek. The Observatory akava musha wake wechipiri. Akaedza muenzaniso wake afuridzire masayendisiti kuti zvinhu zvitsva, uyewo aiva mutungamiriri nesayenzi pane anenge ose basa uye kutsvakurudza. Asi zvachose basa zvenyika ehurumende kuti kubvisa mubati nguva yakawanda nesimba, saka dzimwe nguva zviri ashanyirwa pfungwa nokuvhara Science Center. Sezvineiwo, rimwe ruzivo vanoongorora nyeredzi akakwanisa kuchinja pfungwa dzake uye kukanganisa nzira achinja chisarudzo chake Ulugbek. Observatory zvino akawana simba idzva. Mohammed Taragay akasika nemhaka iyi yakasiyana maumbirwo ayo mapepa akawanda yesayenzi. Uye akaburuka munhau sezvo unyanzvi nyanzvi yemasvomhu uye mutsvakurudzi.
The tevera dambudziko
Kunyange zvazvo Ulugbek akaratidza pacharo ave mutongi tsitsi uye akarurama, zvinosuwisa, kwete zvose zvakafanana murimo enyika muhurongwa. Vakawanda vakataura kuti vanodavira kuti opedza kupfuura nguva yake uye nesayenzi shoma munyaya paruzhinji zvenyika. Naizvozvo, muna 1449, mwanakomana wake ABD Latif, vakapinda vakarangana unonyengera pamwe vavengi baba vake, akauraya Mohammed Taragay uye vakabvuta simba.
Pasinei nezviitiko zvinotyisa izvi, Ulugbek Observatory rakapfuurira ushande kunyange akatevera makore makumi maviri. Asi nokukurumidza vakatanga kutambudzwa masayendisiti, vanovamanikidza kusiya kwete chete pakutsvakurudza centre, asiwo Samarkand. Chivako, Akamisa guru aiongorora uye gavhuna, yakasiyiwa kwenguva yakareba. Muzana nemitanhatu remakore Ulugbek Observatory yacho yakaparadzwa zvinenge pasi, uye akabva aita chete nheyo akasara kubva pairi.
The Kucherwa wekupedzisira remakore
Mukutanga XX remakore, matongo uye mutsvakurudzi L. Vyatkin vaisagona kwenguva refu nguva kuwana kunzvimbo kamwe vakamira Research Center. Zvisaririra zvezvivako yekare dzakafukurwa nemhaka chete gwaro, rakanga kuzvitsaurira nyika uye rave ainyorwa nemanomwe remakore. The wokupedzisira pavaipfuura kupikidura yakaitwa muna 1948 panguva chivakwa anoita zvimedu akawanikwa, izvo chaimbogara ane Observatory pamusoro Ulugbek (Uzbekistan). Uyewo kuti protractor kuwanikwa, yakanga ambotaurwa. Kombiyuta anonyatsorayiridzwa rachengetedzwa nenzira pevhu chikamu chivakwa. Iye zvino zviratidzwa iri tsika muzvikoro Samarkand.
Mune sixties remakore rapfuura, asi miziyamu rakazarurwa asiri kure nzvimbo kunozivikanwa Ages tsvakurudzo centre. Yainzi pashure Ulugbek. The mukati meimba yacho yakashongedzwa siyana murals, izvo dzinoratidzira nguva paupenyu mutongi mukuru uye nyanzvi. The pashoo ine mapikicha akatorwa panguva kupikidura, uyewo muchadenga zviridzwa zvekare uye tafura mitumbi yokudenga. Muna 2010, pedyo miziyamu yakanga shongwe. rokukudza Muhammad Taragay.
Zvakaratidza kuti rinokosha basa esayenzi hwose Ulugbek rakabudiswa pashure pokufa kwake. Izvi zvaiita chete nokuti kuti mumwe vanoongorora nyeredzi yake vaigona kutora Samarkand, kana vasayendisiti vakatambudzwa. Saka, kuti "New Guraganovye muchadenga matafura" dzakabudiswa muna Istanbul uye akaramba achiri kwemakore akawanda, nemamwe ari adzo. Zviri kuburikidza ichi katarogu vanhu vakadzidza kuti akatisiyira gore rine mazuva 365 uye 6 maawa.
Ulugbek (Samarkand, Uzbekistan) - chivako yakaisvonaka, masvingo izvo zvakaitwa nevasungwa zhinji uye vakadzidza, akazova mupiro kunoshamisa mupfuma ruzivo kwevanhu pamusoro zvenyeredzi.
Ko zita Antarctica: ngano uye chokwadi
In Sochi, kudengenyeka kwepasi kuyera 4,7 pfungwa
Saint Petersburg, Tariro Kujekerwa: tsananguro, wokukwezva vashanyi uye zvinonakidza zvinhu
Samara Metro. History of budiriro
Underground Paris. Catacombs kweParis: description, nhoroondo uye muenzi wongororo
Shona: vakawanda, mamiriro okunze, ikoroji uye zvinokwezva
Chechienzi chirungo zvirongo
Sezvo mhanyisa muviri
How vaswedere penzura mugwenga? Danho nedanho mirayiridzo
Akatakura zvombo mu Russia. Terms of pakuunganidza zvombo uye akatakura zvombo Russia
Club "Solyanka", Moscow
Rhesus-kunetsana mai uye mudumbu panguva pamuviri: a tafura. Immune kunetsana amai uye mudumbu
A-siyana appetizers Kubika patafura zororo
Morning muviri: audzwa
Tsiklomed (ziso anodonhedza): tsananguro rekugadzirira
The mushonga 'Supraks'. Reviews, rondedzero, mirayiridzo
Ndavapiko, Generalissimo Russia?
"Fungoterbin" mafuta. kurayira